Apple Archives | Page 17 of 17 | Pyae Heinn Kyaw's Blog
2019 Apple Special Event ကိုဘယ်ကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ရမလဲ?
Apple / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE Apple Special Event 2019 ရောက်ဖို့7နာရီခွဲသာလိုပါတော့တယ်. By Innovation Only လို့ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတော့ ဘာတွေပါလာမလဲစိတ်ဝင်စားစရာပါ ယနေ့ညရဲ့ Live Event ကိုကြည့်ရန် Apple Website Link – https://www.apple.com/apple-events/livestream/ (Calendar ထဲထည့်ထားပြီး Remind လုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်) YouTube Link – https://youtu.be/996wliAI_y4 (Set Reminder On ထားမယ်ဆို Noti တက်လာပါလိမ့်မယ်) ဒီ Page ကနေလဲ Live လွှင့်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်.. Apple ဖက်ကိုဆက်သွယ်ပြီး Live လွှင့်ဖို့ပြောရာမှာ Approve ဖြစ်ခဲ့ပြီး Facebook ဖက်က ဖျက်မချဖို့ပဲလိုပါတယ် Stay Tuned guys Pyae Heinn …
2019 Apple Special Event ကိုဘယ်ကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ရမလဲ? Read More »